अमेरीका बाट फर्केको केही बेरमै ओलीले दिए ‘ सर्पराईज ‘ ! विश्व भर एकाएक भाईरल – Pradeshi Online
अमेरीका बाट फर्केको केही बेरमै ओलीले दिए ‘ सर्पराईज ‘ ! विश्व भर एकाएक भाईरल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव कुमार नेपालसंग आफनो २९ बर्षदेखिको घनिष्ट सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।
पार्टीभित्र सामान्य बिवाद उत्पन्न भएको भन्दै उनले भने “उहाँसँग मित्रता छ। अनुभव छन्। तपाईंहरूले चिन्ता नलिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्छु,” । “कवि मनले लयात्मक ढंगले केही भनिहाल्यो भने त्यसैलाई समातेर कुद्नु पर्ने छैन । पुराना गीत सम्झना हुनसक्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा हावा चल्यो पात हल्लियो भन्दैमा त्यसको पछाडि लाग्नु दृष्टिकोण नभएको राजनीति हुने बताए । ‘त्यस्ता राजनीतिको पछाडि कतिपय पक्ष कुदे भने मुद्दाहीनताको कुरामात्र देखिन्छ ‘ उनले भने । पार्टी एकिकरणका बिषयमा बोल्दै उनले केही समयमै यसको नतिजा देखाउँने ओलीको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने “हिजो चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गर्दा एकता हुनै सक्दैन भन्थे पार्टी एकता गर्दा टिक्दैन भन्थे ,अहिले तल्लो तहमा एकता भएको छैन भन्दैछन् ‘२र४ दिन पर्खिनुस्, व्यवहारबाटै जवाफ दिन्छौं ।” नेकपाको सरकार ५ बर्षसम्म रहने दाबी गर्दे ‘सरकारले नराम्रा काम नगरेको बरू राम्रा काम गर्ने प्रयास गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो सरकार पाँच वर्ष चल्छ। चुनाव गर्छ। अनि अझै बलियो बनेर आउँछ।’ ।
अमेरीका बाट नेपाल फर्के लगत्तै माधव नेपाललाई ओलीले यस्तो भने ( भीडीयो )
ओली-प्रचण्डबीच आज छलफल हुँदै,यस्ता छन् छलफलका बिषय